Ngwaahịa ndị nwere ígwè - nke ngwaahịa dị ọtụtụ ígwè?
Mma Nri oriri kwesịrị ekwesị
Ngwaahịa nwere ígwè na nnukwu nha
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka ndụ nke ahụ bụ ígwè. Mkpụrụ ya na-agba ọsọ site na arịa ọbara, dị ka tugs, na-ejikọta oxygen ma na-anapụta ya n'akpa ume n'ahụ anụ ahụ na akụkụ ahụ mmadụ, ma weghachite carbon dioxide. Usoro a na-aga n'ihu. Akwụsịghị "Downtime" na "efu" okike.
Heme na non-heme ígwè
Enwere mmekọrịta dị n'etiti ụkọ ígwè na enweghi ikuku oxygen, nke na-eduga nkwụsị nke ọrụ ahụ. Mbelata mgbochi, ehighi ura, ike ọgwụgwụ, akpọrọ akpụkpọ anụ na mucous membranes, ike ọgwụgwụ nke ike uche - ihe a nile sitere na hypoxia. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ndị dị otú ahụ, agbala mbọ ilo mbọ ma ọ bụ ṅụọ mmiri nchara. Ígwè nke ịmị mkpụrụ na-emebi ahụike ụmụ mmadụ: ọbara na-aghọ ọkpụkpụ, na-egbu ya ma na-arịa arịa ọbara, usoro nke ịmalite ụdị ụdị nkume niile na-arụ ọrụ.
Mmadụ nwere ike na-egwu ihe ọ bụla. Ngwurugwu zuru oke nke "ígwè", ọ na-amụta, iri ihe oriri nwere ígwè (ọnụego kwa ụbọchị maka ụmụ mmadụ 10-15 mg). Iron ígwè dị iche iche:
A na-achọta ígwè ígwè na ngwaahịa nke sitere na anụmanụ, a na-akpọkwa aha ya n'ihi na ọ bụ akụkụ nke hemoglobin nke ụmụ anụmanụ, n'ihi ya ọ bụ ụmụ mmadụ na-emetụta ya ngwa ngwa.
Ígwè na-abụghị ígwè bụ akụkụ nke osisi. A na-aghọta ya ka njọ. N'ime ihe nile biara na nri, nani otu ụzọ n'ụzọ iri nke ígwè na-abanye na hemoglobin. A na-atụ aro ihe oriri ndị dị elu na ígwè iji jikọta ya na ihe oriri ndị ọzọ nwere vitamin C ma ọ bụ B 12.
Kedu ngwaahịa ndị nwere ígwè?
Ya mere, iji nwee ike "ígwè," ọ dị mkpa iri nri. Ndị na-edozi, abụba, carbohydrates, vitamin, ihe ndị dị na nri na-eme ka nri edozi. Dịka ọdịnaya nke ígwè (kwa 100 g nke ngwaahịa) ọnọdụ anụ ahụ na- ejikwa anụ na ngwaahịa :
imeju (ezi 20 mg, ọkụkọ 17 mg, beef 7 mg);
obi (beef 5 mg, ezi 4 mg);
anụ (oke bekee anụ 4.5 mg, beef 3.5 mg, atụrụ na anụ anụ 3 mg, anụ ezi 1.8 mg, ọkụkọ na toki 1.5 mg).
Mgbe ahụ soro azụ na ihe oriri na-edozi ahụ :
mollusks fọrọ nke nta ka 30 mg;
Meli 7 mg;
oysters 6 mg;
perch mmiri 2.5 mg;
tuna 2 mg;
ọcha na pike site na 1.7 mg;
perch osimiri - 1.2 mg
sprats na mkpọ ịnyịnya mackerel maka 4.5 mg;
Mackere nke mkpọ 3 mg;
nwa caviar 2,5 mg.
Achịkọ anụ ahụ jikwa ígwè mee ihe:
ọkụkọ 4 mg;
quail 2 mg.
Ndepụta nke osisi na- agụnye:
ọka (buckwheat 7 mg, oatmeal 6 mg, rye 4 mg, ọka 3 mg);
nchịkọta (lentil na agwa 7 mg ọ bụla, peas 1.5 mg);
Akwụkwọ nri na elu;
tomato (cornel 4 mg, cherị na raspberries 1.5 mg, strawberries 1 mg);
mkpụrụ (ugu 8 mg, sunflower 5 mg).
Ọ bara uru ikwu banyere mkpụrụ osisi mịrị amị :
akọrọ apụl na pears 5-6 mg;
akpọrọ apricots 3,2 mg;
prunes 3 mg.
Ụdị anụ dị aṅaa ka ígwè?
N'ịnọghị etinye aka na esemokwu ebighi ebi n'etiti ndị na-eri anụ na ndị anaghị eri anụ, a ghaghị icheta na anụ bụ ihe bara ezigbo uru. Na mgbakwunye na uto na mmetụta nke satiety ruo ogologo oge, ọ na-enye ahụ mmadụ nwere ọtụtụ vitamin na ihe ndị bara uru, gụnyere ígwè. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere anụ anụ n'ozuzu, na-ezo aka na efere ọ bụla sitere na anụmanụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ịkpọ oke ume anụ ahụ, nke 100 g nwere ihe ruru pasent 150 nke ọnụego kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ịbịakwute ajụjụ anụ ahụ na-agagharị, na-ebujujujujujujuju na ngwaahịa ndị ahụ (nke ọ bụ), mgbe ahụ, a na-akwadebe anụ ndị nwere ígwè dị iche iche site na nkwonkwo nke anụ ahụ. N'okwu a, ihe kachasị nke ígwè ígwè bụ nke anụ anụ rabbit (100 g nwere 30% nke nkwụnye ego ọ bụla chọrọ n'aka mmadụ). Ntakịrị obere ígwè na anụ anụ, mana ọ na-etinye ya kpamkpam. Tụkwasị na nke ahụ, anụ ahụ na oke bekee ka a na-ewere dịka anụ nri kachasị mma (ntakịrị ihe na abụba na oke - protein).
Kedu azụ bụ ọtụtụ ígwè?
Nri oriri kwesiri ekwenye bu itinye akwukwo nri na nri. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ọla ala, mgbe ahụ, azụ "ígwè" kachasị - perch, tuna, nkume na pike. Ndị ọzọ bi n'oké osimiri na ogbu mmiri: pollock, salmon pink, capelin, saury, herring, black horse, carp, bream, pike perch, wdg. - dị njọ karịa ndị ndu (site na 1 mg ma ọ bụ obere). Microelements nwere ikike iji chekwaa ihe onwunwe ha n'oge ọgwụgwọ okpomọkụ na ichebe, ya mere, azụ azụ nwere ezigbo ihe ndị na-esi na ígwè emepụta ihe, ọ bụghịkwa dị ka nri dị njikere.
Akwụkwọ nri bara ọgaranya
Akwụkwọ nri nwere nri, vitamin na mineral, tinyekwa ụba nke eriri na abụba dị ala, mee ka ha bụrụ ndị eze na tebụl nke ihe ọkụkụ ọ bụla na nri ọkụ. Site na akwụkwọ nri, ị nwere ike ịkwadebe efere na-ekpo ọkụ na nri nri oyi, nri na ọṅụṅụ. Ha nwere ike salted, marinated na mkpọ. Otu n'ime uru nke akwukwo ihe ubi bu ikike iri ha raw.
Na ọgwụgwọ ọ bụla nke ngwaahịa nwere ígwè, ọ na-anọgide na-agbanwe agbanwe, ọ bụ ezie na ọ bụghị isi ihe oriri. Na 100 g nke atịchok nke kachasị ígwè bụ 3.5 mg nke organic metal. Ebe nke abụọ na "ígwè" bụ nke asparagus - 2.5 mg, chard na garlic na-enweta "ọla" maka 1.7 mg. Ndị nnọchiteanya nke òtù ụmụnna na-eto eto na-eto ndị mmeri na akara 0.8 mg.
Kedu ụdị mkpụrụ osisi dị ọtụtụ ígwè?
Mkpụrụ osisi na-eme ka anya mara mma na oge okooko osisi na-enye mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, ọgaranya n'ichepụta ihe. A pụghị ikwu na mkpụrụ osisi bụ ọgaranya na ígwè. Ya kacha ọdịnaya nke 2.5 mg bụ persimmons, apụl na pears, 1.6 mg - mkpụrụ nke ahuhu mkpụrụ, na 1 mg - ụbọchị. Ọtụtụ mgbe ajụjụ bụ "nke ngwaahịa dị ọtụtụ ígwè?", Azịza ya bụ "apụl". Otú ọ dị, eziokwu bụ na iji nweta 100% nke nkwekọrịta kwa ụbọchị ị ga-eri mkpụrụ 40 ruo 70 kwa ụbọchị. Mkpụrụ mkpụrụ osisi dị na vitamin C na B 12, nke na-enye aka mee ka ígwè dịkwuo mma.
Kedu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ọtụtụ ígwè?
A na-akpọ akụkụ elu nke osisi herbaceous elu ma jiri ya mee ihe dị ka ihe si esi, n'ihi mmanụ dị mkpa dị n'ime ya. Ihe ndi ozo enyewo ubi ahihia uzo na-ejikota vitamin C na folic acid maka nkwekorita ya. Otú ọ dị, iji mejuo mkpa kwa ụbọchị, nwoke ga-achọ otu ụyọkọ nke elu.
Green, ọgaranya ígwè:
n'ọnụ mmiri doo 43 mg;
spinach 13.5 mg (ihe na-adịghị gbarie n'ihi na oxalic acid dị n'ime ya);
pasili, dil, peppermint 6 mg;
Basil 3 mg;
cilantro na celery 2 mg ọ bụla;
green eyịm 1 mg;
salad nke 0,5 mg.
Kedu mkpụrụ nwere ọtụtụ ígwè?
Akara siri ike na isi oriri - nke ahụ bụ nri na nri. Site na echiche nke ahụ ike na ogologo ndụ, ọtụtụ ihe ndị bara uru, ihe oriri na vitamin ndị dị na mmiri na-ezo n'okpuru shea. Mgbe anaemia, nsogbu siri ike nke anụ ahụ ma ọ bụ nke uche, nri siri ike ma ọ bụ nnukwu ọbara mgbapụta kwesịrị ịgụnye na nri nke mkpụrụ, ọgaranya na ígwè:
superlider n'etiti "ike mkpụrụ" na "ígwè" ngwaahịa - pistachios 60 mg;
pine nut (na nkà mmụta sayensị bụ mkpụrụ nke fir cedar) 5.5 mg;
ahụekere (site na echiche nke botany na-ezo aka agwa) 5 mg;
almọnd na cashews 4 mg;
hazelnut 3 mg;
ukpa 2 mg.
Kedu chiiz bụ ígwè?
Chiiz nwere ígwè n'obere obere:
Kostroma, Dutch, Poshekhon, roquefort, cheddar 1 mg (kwa 100 g nke ngwaahịa);
Parmesan na Switzerland 0.8 mg;
mozzarella na roquefort 0,5 mg.
Tụkwasị na nke a, a na-akwadebe ngwaahịa a na-edozi ahụ site na mmiri ara ehi. O nwere ọtụtụ calcium na magnesium, nke bara uru maka ụmụ mmadụ, ma na-egbochi mmeri nke ígwè. Ya mere, ahụ mmadụ anaghị aghọta obere ihe a, n'ihi ya, o nweghị isi na-eji cheese mee ihe dị ka ígwè.
Ngwaahịa ndị na-agbanye ala n'ime ọbara
Kiet ke otu ntak emi ẹkedọhọde ke "ndutụhọ" emi ẹdude ke otu mmọn̄ - mme n̄kpọ emi ẹdude ke iron, ẹnamde ke akwa usụn̄. Ọrịa dị oké njọ ma dị njọ nwere ike ịbịara. Ụzọ dị mfe, nke na-abụghị ọgwụ na ụzọ dị irè iji dozie ọtụtụ ígwè - eri ihe oriri nke belata ọbara ya:
Mkpụrụ violet na mkpụrụ osisi na-acha anụnụ anụnụ na tomato, nwere ihe ndị nwere ike ejikọta mkpụrụ ndụ ígwè efu.
Kvasshenye akwụkwọ nri, kwadebere na-enweghị nnu na ọgaranya lactic acid, wepụ ihe toxins.
Esi osikapa, nke a na-etinye na mbu iji wepu starch na ihe ndi siri ike, na-aru oru nke mgbasa ozi na ahu.
Achịcha na pasta, nke na-etolite nnukwu eriri, nke eriri afọ na-esi na ya apụta.
Ihe oriri ndị na-egbochi ịmịkọrọ ígwè?
Onye ọ bụla nke na-arịa ọrịa anaemia ma ọ bụ, na Kama nke ahụ, na - agbasi mbọ ike belata nchịkwa nke ngwakọta ihe ndị dị n'ime mmiri, onye kwesịrị ịma ihe ngwaahịa na - egbochi njide ígwè:
Mmiri ara ehi na mmiri ara ehi nwere calcium.
Tea, nke nwere tannins, na kọfị.
Ụba na otutu vitamin E.
Mkpụrụ osisi ọka - ọma na ihe ọjọọ
Nri bara uru
Ayran - ihe oma na ihe ojo
Millet porridge - ọma na ihe ọjọọ
Kedu ka esi egwu mmiri n'ọdọ mmiri ka ị ghara ibu ibu?
Ntụziaka na-edozi nri maka ịla n'iyi n'ụlọ
Bulimia: esi tufuo?
Kedu ihe ga-eji dochie ntụ ọka na ntụ ọka na-efu?
Kefir na kukumba maka ụkọ ọnwụ
Ginger - ọma na ihe ọjọọ
Guinea nsen anu - uru bara uru
Kedu ihe bara uru maka wheat porridge?
Beets - ọma na ihe ọjọọ
Kedu ka esi eri obere iji ghara ibu ibu?
Cystoma nke ovary kwesịrị ekwesị
Uche nke aka nri
Ugboro ala njem njem
Nri celery salad
Mammography na ultrasound nke mammary glands
Ụlọ ntu maka izu ike
Kedu ka esi kpoo akwara nke aka na ulo?
Kedu ihe mere akpa ji apụta n'okpuru anya?
Quota na IVF
Ihe omumu nke otutu ihe
Onyinye maka nwanyị ruo afọ 40
Janet Jackson na nwa ya nwoke ga-eme ememe Krismas na London, n'agbanyeghị mkpesa nwatakịrị ahụ
Efere nri - ihe kachasị mma maka snacks, salads na efere ọkụ na-eri nri mmiri
Akwa edozi isi maka ogologo ntutu
Kate Hudson gosipụtara nke ukwuu n'ihi oke oke
Mmehie na Saline na Lazolvan
Rezekne - ebe nkiri
Nwaanyị Kardashian hapụrụ coma
Gịnị mere ụmụ nwanyị ji kwụsị ntutu isi ha?
Tavolga - bara uru ihe onwunwe na contraindications